China 15Khz 2600w Yakakwira Simba Ultrasonic Welding Oscillator ine Simbi Booster Kugadzira uye Fekitori | Qianrong
20Khz Ultrasonic Yakagadziriswa Welding Nyanga naAnodiz ...
Yakakwira Frequency 20khz Ultrasonic Maindasitiri homogeniz ...
Yakakwira Frequency 35Khz 1000w Ultrasonic Kuisa chisimbiso Equipm ...
Ultrasonic Mhangura Aluminium Shanduko 20Khz 3000w Isu ...
Nickel Mesh uye Nickel Plate Welding kubudikidza 3000w 20Khz ...
20Khz Ultrasonic Rubber Kucheka Midziyo ine 60mm Bla ...
20Khz 1500w Ultrasonic Welding Welding Transducer ine Simbi ...
15Khz 2600w Yakakwira Simba Ultrasonic Welding Oscillator ...
15Khz 2600w Yakakwira Simba Ultrasonic Welding Oscillator ine Simbi Booster
Kakawanda 15 khz
Simba rekuburitsa 2600 watt
Yakabatana bhaudhi M16 * 1
Ceramic disc dhayamita 60mm
Qty pamusoro zvedongo discs 4pcs
Kushanda Muchina wepurasitiki wekuwisira
Iyo ultrasonic Oscillator inonzi zvakare iyo ultrasonic vibrator. Iyo yese indasitiri yakabatana nenyanga uye runyanga runonzi vibrator. Iyo ultrasonic vibrator chishandiso chinoshandura simba remagetsi uye mehendi simba (acoustic vibration) ne piezoelectric mhedzisiro ye piezoelectric ceramics, uye inosimudzira iyo yekumberi uye yekumashure radiation radiation mabhuroko neacoustic impedance inoenderana.
Iyo ultrasonic vibrator inoumbwa neiyo ultrasonic transducer uye iyo ultrasonic runyanga. Ultrasonic transducer chishandiso chinogona kushandura yakakwira-frequency magetsi simba kuita echimakanika simba. Ultrasonic runyanga chishongedzo chisingagadzi kuburitsa. Izvo zvinongo shandura iyo amplitude yeiyo vibration yekuisa kubva kune iyo ultrasonic transducer uye wozoitumira iyo. Impedance shanduko.
Sei kusarudza ultrasonic epurasitiki Welding muchina ine 20khz uye 15khz frequency?
Iwo akajairika mafrifiti eiyo ultrasonic yekutengesa michina ndeye 15khz uye 20khz ultrasonic epurasitiki yekutengesa michina. Iyo yakakwira iyo ultrasonic frequency, zvirinani iko kutenderera kwekutwasuka, asi idiki iyo hama simba, idiki iyo iyo amplitude. Izvi zvinotevera kurondedzera musiyano uripo pakati peiyo ultrasonic welding muchina 15khz uye 20khz:
Kana iyo ultrasonic frequency yakaderera, ruzha runogadzirwa. Kana iyo frequency yakaderera pane makumi maviri khz, ruzha runova rwakakura kwazvo panguva yeiyo ultrasonic welding. Zvezvigadzirwa zvepurasitiki zvine huremu hwakanakisa hwesimbi, iyo inowedzera kuwanda, zvirinani. Naizvozvo, iyo yemagetsi ultrasonic yekutengesa muchina ye20khz kana yakakwira yakakodzera kune chaiyo, yakasviba-yakatetepa, isina kusimba kwazvo epurasitiki zvikamu, senge SD kadhi, kana zvigadzirwa zvine kristaro mukati meichi chigadzirwa; 15khz ultrasonic Welding muchina zviri nyore kuwedzera uye ine yakakura amplitude. Iyo inokodzera kuwelda yakakura-saizi, yakaoma-ku-weld, zvigadzirwa zvakashata zvepurasitiki zvigadzirwa;
Kechipiri, iyo 15khz uye 20khz ultrasonic mould saizi zvakare hazvienderane. Iyo kukwirira kweiyo 15khz ultrasonic mould inowanzo kuve inenge 17cm kureba, nepo iyo 20khz ultrasonic mould iri ingangoita 12.5cm kureba.
Kamwe zvakare, iyo 15khz ultrasonic epurasitiki yekutengesa muchina inogona kusimbisa yakakura workpieces, uye simba rinogona kukamurwa kuita 2600w / 3200w / 4200w. Iyo 20khz yakakwenenzverwa epurasitiki yekumonera muchina iri 900W - 2000w, simba idiki, uye saizi yechigadziro chechigadzirwa idiki.
Pashure: Yepamberi 20Khz 3300w Ultrasonic Welding Kutsiva CJ20 Transducer ine Simbi Simbi Yekunze Cover
Zvadaro: 20Khz 1500w Ultrasonic Welding Welding Transducer ine Simbi Booster Vibration System
Akangwara 15Khz Ultrasonic jenareta Dhijitari ...